जमानाको कुरा : प्रकृतिक चिया | Wakhet Diary
जमानाको कुरा : प्रकृतिक चिया
Posted on January 31, 2013 by Wakhet Diary
अहिले चिया, कफी ले थुप्रै परिबर्तन ल्याई सकेको छ। ग्रिन टि, लेमन टि, फ्लेवर र भेराइटी गन्ने हो भने पनि थुप्रै समाय लाग्ने भै सकेको छ चिया तर आज को एपिसोड मा हामीले पुरानो समायमा हाम्रो पुर्बज ले पिउने चिया को बारे मा चर्चा गर्ने छौ ।
चिया के हो ?
अहिले को कन्सेप्ट मा चिया को परिभाषा निकै फराकिलो भै सकेको छ। चिया अम्मल बनि सकेको छ भने यसका भेराईटीहरु पनि लामै पुगेको छ। तर पुर्बज को जमाना को कुरा गर्ने हो भने चिया जिउ दुखेको बेला पिउने तातो झोल थियो।
चिया:भीर अमिलो को जरा
पुरानो समायमा चिया भिर अमिलो को जरा लाई पानी मा उमाले पछि रातो रँगको हुने गर्दथ्यो यहि झोल नै मानिसले ज्यान दुखेको बेला मा । चिसो लागेको बेला मा। पटे दुखेको बेला मा पिउने गर्दथे। त्यस बेला यो चिया भन्दा पनि ओखती को रुपमा प्रयोग मा आएको थियो। आज भन्दा २० बर्ष पहिले सम्म पनि यो चलन जिवित थियो। तर बिस्तारै नगदको चलन र फ्याक्र्टी को चिया को चलनले यि प्रकृतिक चियाहरु लोप भएर गए। भीर अमिलो भने को जँगली अमिलो हो। यो भीर मा उम्रे र अमिलो फलेको हुन्छ। अमिलो का पुरानो जराहरु लाई पानीमा उमालेर पिउने गरिन्थे।
चिया: खर्सुङ खोटी
हिउ पर्ने लेख मा खर्सुंङ (खर्सु) भन्ने ठुलो बोट हुन्छ यो पुरानो भए पछि हिउद मा पालुवा छाड्ने बेलामा यसको रुख को भित्री टोड्को मा बिशेष खाल को रस चुहिन्छ। यहि रसलाई वाफ गरेर सुकाई यहि काठ को टुक्रा जस्तो ठोस बनाएर पछि पानी मा नुन सँग उमालेर चिसो को बेला या ज्यान दुखेको बेला मा पिउने हर्वल उपचार नै थियोहाम्रो पुर्बजहरु को चिया । सायद यसै कारण ले होला हाम्रो समाज मा चिनी को प्रयोग हुनु भन्दा पहिले सम्म चिया नुन कै हुने गर्दथे।
खर्सुङ खोटी, र भीर अमिलो को जरा अब जमना को कुरा भए। यो हाम्रो समाज मा नदोहरिनु पनि सक्छ। तर हाम्रो पुस्ता ले खास मा के थिए ? यो अनुसन्धान गरे हाम्रो शरिरलाई काम लाग्ने हर्बल चिया पो थिए कि ? यसै गरी तेजपत्ता ( दालचिनी) को पात पनि पुरानो समाय मै चिया कै रुपमा झोल पिउने पात हो। यो अझै पनि तरकारी मा मसाला कै रुपमा प्रयोग मा छ भने खर्सुङ खोटी, र भीर अमिलो को जरा यो जमाना को कुरा भै सकेको छ।
अरुले च्याउ देखी लेउ सम्म को चिया उत्पादन गरि सके। तर हामी ले भने पुर्खा ले प्रयोग गरेको प्रकृतिक चिया लाई राम्रो कि नराम्रो जाँच्ने प्रयास पनि गरेनौ र हामी पछि परेको पर्ये भयौ।
– स्यानु पाईजा
(जमाना को कुरा भित्र बाट )